Farmaajo ma laga yaabaa inuu soo laabto?
Saturday February 06, 2021 - 20:42:57 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Ugu horreyn faalladaydani kuma saabsana, wax-qabadka Farmaajo iyo waxa uu ka gaabiyey. Waase arin la iswaydiin karo, waxa laga dhaxlay maamulka Farmaajo dhib iyo dheefba. Anigase tayduna waxay daaran tahay, suurto-gal ma tahay inuu soo noqdo mise waxa hortaagan, caqabado waaweyn oo isugu jira, kuwo maamul goboleed, kuwo mucaarad iyo kuwo qabiil, marka loo eego aasaaska Soomaaliya oo ku dhisan hab-qabaliya ama [Afar iyo badh] waxa loo yaqaan.
Waxaan aragti ahaan aaminsanahay, inaanu soo noqon doonin, caqabadahan horyaala awgood, waxaanay kala yihiin;
· Muranka ka taagan isaga iyo kooxaha is bahaystay ee madasha mucaaradka la baxay. Kuwaasoo culays weyn ku keenay qabsoomida doorashada. Culayskani mar waa mid siyaasiya oo u dhigaya in loo heshiiyay Madaxwaynaha, lagana dhigayo Tuke baal-cad, oo caqabad ku ah qabashada doorasho Xor iyo xalaal ah, loona siman yahay. Marna midawgani waa mid qabaliya, oo isaga qabad ku noqonaya, markaad ka eegto hormuudka iyo badiba mucaaradku halka ay salka ku hayaan. Habkani waa siday Soomaaliya u taalo iyo qabada hortaagan
· Labada maamul ee Puntiland iyo Jubaland, iyaguna waa caqabado aan la dhayalsan Karin, oo hortaagan doorashada labaad ee Farmaajo. Marka laga eego, saameynta ay Federaalka ku leeyihiin, taasoo ah mid Siyaasiya iyo mid qabali ahba. Waxa laga yaabaa inaad fahamto midda siyaasiga ah, waxaadse is waydiin kartaa, waa maxay ta qabaliga ahi waaba isku hurine ? Matalaada Soomaaliya ee beesha Daarood waxa saldhig u ah Kablalax. Isaguna iskuma jiree Majeerteen iyo Ogaadeen,siiba Majeerteen, oo aan marnaba aqbalin matalaada Farmaajo. Arintani maaha ugub ee waa curad, meel dheer iyo taariikh dambe midna loogu noqon maayee, horay isaga xukunkiisa u galaafatay.
· Faro-galinta Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo, waxay sumcad darro iyo bar madaw ku tahay Madaxwayne Farmaajo. Waxaanay qaawinaysaa loolanka salka ku haya doorashada, ee ka dhaxeeya labada beelood ee Mareexaan iyo Ogaadeen. Labadaba wuxuu u wada yahay madaxwayne wada matala, haddase wuxuu u dhurtay Madaxwayne ku diriraya reerkii uu ka dhashay iyo deegaankiisa gaarka ah.
· Muranka ka taagan cidda soo xuli doonta Xildhibaanada ka imanaya Waqooyi, gaar ahaan waxa loogu yeedhay [Dir Waqooyi]. Qodobkani waa mid Farmaajo u hiilin doona haddii ay u marto sida uu hadda u wado. Waxase arintan muggeeda og, inay aqbalaana ku aday tahay, dhammaan kooxaha isbahaystay ee ka soo horjeeda, hadday noqdaan midawga mucaaradka, Puntiland iyo Jubaland iyo Guddoomiyaha aqalka sare oo isku dhigaya inuu yahay masuulka ugu culus ee ka soo jeeda [ Dir Waqooyi ]
· Faro-galintiisa tooska ah ee doorashadu waa mid xagal daac ku keentay, habsami u socodka doorashada. Taasoo keentay middi middi ku taag iyo is aaminid la'aan dhex timid isaga iyo ciddii la tartami lahayd.Waxaanay ku tusinaysaa inuu doonayo gar iyo gar-darraba inuu isagu u maamulo doorashada sida uu ku soo bixi karo ! Arintan waxay u arkaan Mucaaradkiisu inuu rabo, doorasho uu isku sii dubarito intaan la isla gaadhin xilliga doorashada. Arintani waa caqabad aanay aqbali doonin cidda la tartamaysaa
Maxaa dhici kara intaasoo caqabadood, hadday hortaagan yihiin?
Waynahaa og, waxa maqan iyo xaalku halka uu ku dambayn doono. Odoroskaygani’se wuxuu ku soo biyo shubanayaa laba arimood midkood, kuwaasoo kala ah ;
· Haddii doorasho lagu galo habkan uu wax ku wado, wuxuu noqonayaa madaxwayne is cumaamaday, oo gacantiisa ku soo xushay dadkii dooran lahaa. In markaa lagu baariko iyo in baaruudu qaado, taariikhda dambe ayaa sheegi doonta
· Waxa kale oo dhici karta beesha caalamka
ee haddaba, la leeyahay kuwo ka mida ayaa isaga dabada ka riixaya, oo kursiga ku haya, inay u arkaan danahoodii Soomaaliya inaanu isagu qaban Karin. Maadaamoo duufaano siyaasiya iyo kuwo qabaliyi ka horyimaadeen. isla markaana soo xushaan waji cusub oo danahoodana ogol, dadkuna aanay ka didin. Isagana la saaro culays uu xilka kaga tago, sidii horeba loo saaray.
Gunaanadkii: Ogow, hoostana ka xariiqo, Farmaajo muddo xileed labaad, inuu soo noqdaa way adag tahay, qadarka waynaha mooyaane. Ifafaalihii iyo raadkii uu ku soo noqon lahaana maaha kuwo ii muuqda. Wabillaahi tawfiiq
W/Q: Maxamed C. M. Ugaaska, oo ah Soomaali ku cabiray aragti madaxbannaan